च्यानल: '१ 1932 ३२ को प्रतीक' - उच्च गहना सपना
सौन्दर्य कालातीत छ। गहना मा सुन्दरता पनि कालातीत छ। नयाँ '१ 1932 XNUMX२ को आइकनहरू' को साथ, च्यानल अनन्तसम्मको भावनामा पुग्छ।
यस उत्तम ज्वेलरी संग्रहले आइकॉनिक मनसायलाई पुनर्जीवित पार्छ जुन १ 1932 .२ मा गब्रिएल चनेल आफैले, 'बिजुक्स डि डायमेन्ट्स' द्वारा डिजाइन गरिएको पहिलो र अनुपम उच्च गहना संग्रहलाई एनिमेटेड गर्दछ।
उच्च गहना संग्रह 'बिजुक्स डि डायमान्ट्स'गब्रिएल चनेल आफैंले डिजाईन गरेको पहिलो र मात्र उच्च गहना संग्रह हो।
नोभेम्बर १ 1932 XNUMX२ मा खिचेको पाथीको फिल्मले मुड दिन्छ (फ्रान्सेली भाषामा, अंग्रेजी उपशीर्षकहरू उपलब्ध छन्):
चैनल 'बिजुक्स डि डायमान्ट्स' प्रोमोशनल फिल्म, १ 1932 .२, केवल गहनाको संग्रह मात्र होइन, तर गहिरो तरिकाले रत्नहरू प्रदर्शन गरिएको थियो।
फिल्मले यस संग्रहको अभिनव आकर्षणको चित्रण गर्दछ। आविष्कार ज्वेलरीले प्रदर्शन गर्ने तरिकाबाट सुरु भयो: उनको बुटिकमा होइन, तर उसको निजी अपार्टमेन्टमा २ at, फाउबर्ग सेन्ट-होनो, पेरिस हो। परम्परागत गहना केस र कालो मखमल कुशनमा होईन, तर उचित ढ sty्गले स्टाइल गरिएको मोम मन्नेक्विनहरूमा।
हीरा १ 1932 .२ उच्च गहना संग्रहको मुख्य पात्र थियो।
यदि मैले हीरा रोजेको छु भने, यो यसको प्रतिनिधित्व गर्दछ, यसको घनत्वमा, साना खण्डमा सब भन्दा ठूलो मान।
गहनाको फ्रेमहरू तरल पदार्थ बन्न, सम्भव भएसम्म शरीरलाई सजिलो बनाउन। तिनीहरू अंगालो हालेर शरीरलाई लुगा लगाउँदछन् जसरी चनेलको कचर सृष्टिहरू।
म गहनाहरू चाहान्छु कि रिबन जस्तो एउटी औंलाको औंलाहरूको बीचमा स्लिप हुन्छ।
गहनाहरू स्वतन्त्रताको प्रतीक भए, र उनीहरूले हामीसँग माडेमोइस्लेको जीवनको कुरा गरे (र बोले)। प्रत्येक डिजाइनले उनको बाल्यकालबाट केही फिर्ता ल्यायो।
तिनीहरू हीरा तारा, अर्धचन्द्राकार, सूर्य र माल्टाको क्रसहरूमा मनोरन्जन गर्दछन् जुन ढु of्गाको ढु laid्गामा राखिएको थियो Aubazine को अबी जसमाथि सानी केटी दिनहुँ ठूलो हुँदै जान्छ।
संग्रह, यसको आत्मा र यसको प्रतीकहरू
१ 1932 XNUMX२ मा, गेब्रिएल चनेल, आफ्नो रचनात्मक स्वभाव र मोती र रंगीन रत्नहरू सहितको उनको पोशाक गहनाको लागि दुबै प्रसिद्ध, उनको ध्यान ढु stones्गाको राजातिर फर्काउँछिन्: हीरा।
१ 1932 1929२ मा युरोप अझै ठूलो पीडामा थियो १ XNUMX २ crisis को स following्कट पछि, र त्यही वर्षमा, हीरा व्यापारीहरूको संघले माडेमोइसेले चनेललाई उनीहरूको हीरालाई योग्यको दृश्यता दिन भन्यो। त्यसपछि उसले हीरा उधारो लिन्छ, र 'बिजुक्स डे डायमान्ट्स' संग्रह जीवनमा आउँदछ।
गेब्रिएल चनेलले गहना सेटिंग्सलाई सरल बनाउँछिन् र उनले ब्रान्डमा नयाँ गहनाहरू डिजाइन गर्छिन् जुन रेखामा अनुसरण गर्छन् जुन आकाशमा पत्ता लागेको थियो।
धूमकेतुहरू काँधहरू वरिपरि चम्किन्छ, ड्याकलेटिज ताराहरू भरिएको छ: “म महिलाहरूलाई नक्षत्रमा नुहाउन चाहन्छु”, उनी भन्छिन्।
च्यानल 'बिजुक्स डि डायमान्ट्स' उच्च ज्वेलरी संग्रह, १ 1932 .२ Comète Necklays
प्रतीकात्मक रूपमा, उनले उनको 'बिजुक्स डि डायमेन्ट्स' संग्रहका लागि पाँच विषयवस्तुहरू छान्छिन् -,, उनको भाग्यशाली संख्या, जादूमा व्यक्त गरिएको तारा, को उदय सूर्यको तरलता रिबन, को nonchalance किनार र को हल्काता प्वाँख.
प्रदर्शनी ठूलो सफलता हो तर प्लेस भेन्डेमेका पुरुष जौहरीहरुलाई अपसेट गर्दछ, जसले गेब्रियल चनेललाई साधारण मान्दछन्। सिमस्ट्रेस। तिनीहरू त्यसोभए तुरून्तै ज्वेलहरू बिच्छेदन गर्न माग गर्दछन्, तर माडेमोइस्लेले भने जस्तै: "के सबैभन्दा राम्रा चीजहरू सर्कुलेट बनाउनको लागि बनाइएको छैन?"
यो तथ्य हो कि हीरा चाँडै युनियनमा फर्किए पनि, यो उच्च गहना संग्रह यति क्रान्तिमा क्रान्तिकारी साबित भयो कि आज उनीहरू एक प्रेरणाको सशक्त स्रोत रहन सक्छन्।
अन्तमा, १ 1932 XNUMX२ को संग्रह गेब्रिएल चनेलको पहिलो र केवल उच्च गहनाको संग्रह हुनेछ। यसको साथ, उनले एक कालातीत कोड स्थापना गर्‍यो: ओस्टिएन्टेशन भन्दा सर्जनशीलता, बढाइचढाइको बारेमा हल्कापन।
1932 को आइकनहरू
'१ 1932 XNUMX२ को आइकनहरू' फाइन ज्वेलरी संग्रहले विषयवस्तुहरूको पुन: व्याख्या गर्दछ जुन माडेमोइस्लेको शैलीको मुख्य हो: ताराहरू र धूमकेतुहरू, सूर्य, रिबन र फेद। यसले माडेमोइसेलेको ब्रह्माण्डको अर्को तत्व पनि थप गर्दछ: सिंह।
यस संग्रहका गहनाहरूले 'बिजुक्स डि डायमेन्ट्स' सिर्जनाहरूको स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रताको सम्झना गर्दछन्। तिनीहरू ट्रान्सफर्मेबल हुन् र पहिरनकर्ताले उनको मनस्थिति, शैली र व्यक्तित्वलाई आफ्नै इच्छामा व्यक्त गर्न अनुमति दिन्छ।
'Comète Necklays' ले कमेट पेंडन्टलाई हटाउन र ब्रोचको रूपमा लगाउन अनुमति दिन्छ:
'सोलिल डी चनेल' एक मनमोहक ट्रान्सफर्मेबल रिंग हो। गहनाका दुई भागहरू या त एक औंलामा सँगै वा दुई औंलाहरूमा दुई छुट्टै घण्टामा लगाउन सकिन्छ।
च्यानल, '१ 1932 XNUMX२ को आइकनहरू', प्ल्युम डे चनेल रिंग।
१kk पहेंलो सुन, १kk सेतो सुन र हीरामा घण्टी दिनुहोस्। १18k सेतो सुनको सेटमा ११ Bra ब्रािलियन्ट-कट हीराको साथ ब्रेसलेट। CHANEL राम्रो गहना।
च्यानल '१ 1932 XNUMX२ को आइकनहरू'।
१kk बेज रंगमा सुन र हीरामा रुवानको कंगन। १kk बेज सुन र हीरामा रुवानको औंठी।
चनेल, '१ 1932 XNUMX२ को आइकनहरू', सुस ले सिग्ने डु लियोन ब्रोच।
१kk पहेंलो सुन र हीरामा ब्रोच।
स 1932्ग्रह १ I XNUMX२ को आइकनहरू को रत्नहरू, फेरि एक पटक, "जसको लागि सुन्दरता कुनै दायित्व वा अधिवेशन थिएन, तर केवल एक तरिकाको, एक अलौकिक"।
चनेलको उत्तम गहना संग्रह 'आईकनहरू १ 1932 XNUMX२' बुटीकमा उपलब्ध छ।
ट्यागच्यानल • राम्रो गहना
० मा टिप्पणीच्यानल: '१ 1932 XNUMX२ को आइकनहरू'"